चलचित्र निमार्णमा रेखाको निरन्तरता, बन्ने भो ‘लाल मस्तिष्क’ ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
चलचित्र निमार्णमा रेखाको निरन्तरता, बन्ने भो ‘लाल मस्तिष्क’ !
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार
काठमाडौं, १५ फागुन । लोकप्रिय नायिका रेखा थापाले नयाँ चलचित्र निमार्णको घोषणा गरेकी छन् । रेखा फिल्मसको पाँचौ प्रस्तुतिका रुपमा ‘लाल मस्तिष्क’ घोषणा गरिएको हो । नर कार्की, सरस्वती थापा र तारा थापा निर्माता रहने उक्त चलचित्रको निर्देशन सम्झना उपे्रतीले गर्नेछन् ।
चलचित्र ‘लाल मस्तिक्स’ का असंख्य दृश्यहरुको छायांकन राम शरण उप्रेतीले क्यामेरामा कैद गर्नेछन् । चलचित्रको छायांकन कर्णाली प्रदेश र अन्य केही स्थानमा गरिनेछ ।
गत लक्ष्मी पुजामा रिलिज भएको चलचित्र ‘रुद्रप्रिया’ लाई केही समय अघि मात्रै यूटुवमा सार्वजनिक गरेकी नायिका थापाको घोषित चलचित्र ‘लाल मस्तिष्क’ को स्क्रीप्ट शिबम अधिकारीले लेखेका हुन । चलचित्रको मूख्य भूमिकामा रहने कलाकारको नाम सार्वजनिक नगरिएको चलचित्र ‘लाल मस्तिष्क’मा सुरेश अधिकारीको संगीत रहनेछ ।
द्धन्द्ध निर्देशकका रुपमा राजकुमार उपे्रती रहेनछन् । त्यस्तै नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठलाई अघि सारिएको नायिका थालेको जानकारी दिएकी छन् । चलचित्रको कथा वस्तुको परिकल्पनाकार स्वयम नायिका रेखा थापा र नर कार्की रहने छन् ।
हालै घोषणा गरिएको चलचित्र ‘लाल मस्तिष्क’ आगामी २०७५ साल जेठ महिनादेखि छायांकन गरिने नायिका थापाले जानकारि दिएकी छन् । वर्षमा एउटा उत्कृष्ट चलचित्र निमार्ण गर्दै आईरहेकी नायिका थापाको यो चलचित्र पनि लक्ष्मी पूजाको दिनमा प्रदर्शनमा आउने छ ।
नवौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलमा एक दिने फिल्मी कार्यशाला हुँदै
चैत २० देखि ‘गुड फ्रेण्ड’
‘अर्जुन रेड्डी’को नेपाली रिमेकका लागि काठमाण्डौमा अडिसन सम्पन्न
दीपाश्रीलाई वर्षकै उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड
‘मिस इको इन्टरनेशनल’ भाग लिन इजिप्ट उडिन् अनुश्मा
पुष्पको लुक्सले ‘कृष्ण–लीला’ को चर्चा
चलचित्र निर्माता र बितरकको संयुक्त लगानीमा खुल्यो नेशनल इएनटी सेन्टर
अनिलालाई ‘टलटल टल्किने’ बाट मिल्यो करोडको खुसी
आदर्श शर्माले गरे फोकस फेशन हाउसको शुभारम्भ